Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha kulaylka Wareejinta Shiinaha ee Goyn kara |Alizarin
Adhiga Wareejinta kulaylka la gooyn karo
Magaca Alaabta: Adhiga Wareejinta kulaylka la gooyn karo
Code Product: CCF-adhiga
tilmaamo kale ayaa looga baahan yahay.
dhammaan qorshayaasha goynta caadiga ah, sida
Graphtec FC8600, CE6000, CE6000-F-Mark, CE LITE-50, Silhouette CAMEO, GCC-China RX II, Jaguar V, Puma IV, Khabiir II, AR-24, i-Craft iwm.
Wareejinta kulaylka la jarjaray waa adhiga viscose wareejinta kulaylka oo tayo sare leh oo ku saleysan filimka polyvinyl chloride, oo leh dhalaal iyo muuqaal ay sabab u tahay cufnaanta fiber sare, oo la soo saaray si waafaqsan heerka EN17. line, Goynta heer sare ah iyo guryaha haramaha.Xitaa calaamado faahfaahsan iyo xaraf aad u yar ayaa miiska la jaray.Xabagta kulul ee cusub ee cusub ayaa ku habboon in lagu wareejiyo dunta sida suufka, isku dhafka polyester/suuf iyo polyester/acrylic, Nylon/Spandex iwm. xirashada iyo maqaallada xayeysiinta.
Wareejinta kulaylka la jarjaray waxaa loo isticmaali karaa in lagu qoro funaanadaha, ciyaaraha & xirashada xilliga firaaqada, bacaha isboortiga iyo maqaallada xayeysiinta.waxaana lagu gooyn karaa dhammaan qorshayaasha hadda jira.Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho mindi 30° ah.Ka dib marka la gooyo filimka jilicsan ee la gooyey waxaa lagu wareejiyaa kulaylka.Ku jar Flock miiska oo leh filim polyester ah oo dhejis ah, oo awood u siinaya dib u habeyn.
■ Ku beddel maro garaafyo midabyo badan leh.
■ Loogu talagalay natiijooyin muuqda suuf madow ama midab khafiif ah ama suuf / polyester-ka la isku daray
Adhiga wareejinta kulaylka la gooyn karo waxaa goyn kara dhammaan qorayaasha goynta caadiga ah sida: Roland CAMM-1 GR/GS-24, STIKA SV-15/12/8 desktop, taxanaha Mimaki 75FX/130FX, CG-60SR/100SR/130SR, Graphtec CE6000 iwm.
Waa inaad had iyo jeer hagaajisaa cadaadiska mindida, adigoo jaraya xawaaraha iyadoo loo eegayo da'daada daabka iyo dhibka ama cabbirka qoraalka.
Fiiro gaar ah: Xogta farsamo ee kor ku xusan iyo talooyinka waa tijaabooyin ku salaysan, laakiin jawiga shaqada ee macmiilkayaga,
kantarool la'aan, ma dammaanad qaadayno ku-dhaqankooda, Kahor intaan la isticmaalin, Fadlan marka hore si buuxda u tijaabi.
■ Ku sii kululee birta ilaa goobta < dhogorta> ah, heerkulka feerida lagu taliyay waa 165°C.
■ Ha isticmaalin shaqada uumiga.
■ Hubi in kulaylku si siman ugu wareegay aagga oo dhan.
■ Bir warqadda wareejinta, adigoo isticmaalaya cadaadis badan intii suurtagal ah.
■ Marka la dhaqaajinayo birta, cadaadis yar waa in la bixiyaa.
■ Ha iloobin geesaha iyo geesaha.
■ Fiiri filimka dambe ee ka bilaabmaya geeska ka dib habka feereeynta.
■ Dejinta mashiinka kulaylka 165 ° C 15 ~ 25 sekan adigoo isticmaalaya cadaadis dhexdhexaad ah.saxaafaddu waa inay si adag u xidhataa.
■ Si kooban u cadaadi marada 165°C ilaa 5 ilbiriqsi si aad u hubiso in ay gabi ahaanba siman tahay.
■ Riix mashiinka 165°C 15 ~ 25 ilbiriqsi.
■ Fiiri filimka dambe ee ka bilaabmaya geeska.
Hore: Filimka Daahsoon ee Eco-Solvent InkJet
Xiga: Filimka Eco-Solvent Ink Jet Backlit Film
Wareejinta kulaylka la gooyn karo PU Flex Premium
Wareejinta kulaylka la gooyn karo PU Flex Saamaynta
Wareejinta kulaylka la gooyn karo PU Flex Joogtada ah